Nkeji atọ, Tromostovje - Ljubljana
Adreesị: Ljubljana, Slovenia;
Ihe mmiri: Ljubljanica.
Ejiji okpukpu atọ ahụ dị na mpaghara akụkọ ihe mere eme nke Ljubljana . Ihe na-adọrọ adọrọ bụ otu nkwekọrịta atọ nke a na-atụfe gafee osimiri Ljubljanica . Ogologo okpukpu atọ nwere ihe okike dị iche iche, nke ọ bụ ihe ịchọ mma nke ochie nke obodo ahụ na ebe a na-ewu ewu n'etiti ndị njem nleta.
Ewughari nke àkwà mmiri
E kere ihe ịtụnanya maka afọ 90. N'afọ 1842, dịka atụmatụ nke ndị omenala Italian si kwuo, e wuru nke mbụ nke bridges atọ. Ọ bu aha na-asọpụrụ Archduke Franz Karl ma nwee oghere abụọ. Ná mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, e nwere mkpa ịgbasa akwa mmiri ahụ, mana kama na Plechnik kwadoro ịmepụta ụzọ abụọ ọzọ ga-esi kwekọọ na nke dị ugbu a. Ọ na-etinye echiche nke mbụ, nke njikwa ahụ chọrọ. Ka ị ghara ịhụ ọdịiche dị n'agbata ochie na ọhụụ ọhụrụ ahụ, a kwaturu mgbidi ígwè nke nkedo nkume ahụ, a na-atụkwa balustrades, dịka ndị ahụ dị na bridges a rụziri ọhụrụ, kama.
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, Triple Bridge bụ njem njem, ya na njem ụgbọ okporo ígwè - ụgbọ ala na trams na-esochi ya. Ma n'afọ 2007, ebe a na-akpọ Ljubljana na akụkọ ihe mere eme, e mechibidoro akwa ahụ maka okporo ụzọ, mmiri ahụ wee ghọọ onye na-agafe.
Kedu ihe na-adọrọ mmasị banyere akwa ahụ?
Osimiri atọ ahụ ejikọta ọ bụghị naanị na ọdọ mmiri Ljubljanica, kama ọ dịkwa n'etiti nnukwu obodo ukwu - Central na Prešern . N'ihi nke a, onye ọ bụla njem nleta, na-eleta akụkụ ochie nke obodo, otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na-agabiga na akwa. Ma ọ dịghị onye ọ bụla nọgidere na-enwe mmasị n'ebe ọ nọ. Nsu nke ọdọ mmiri dị na Venetian na-enye echiche na e wuru usoro ahụ ọtụtụ narị afọ gara aga. Ma, mmiri ahụ na-adọta ihe owuwu ya na mbụ. Ndị njem na-anọ ebe a ruo ogologo oge, na-ejegharị otu n'otu ma na-esote ala ọzọ, na-ahọrọ ọnọdụ ka mma maka foto.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ụlọ ụka ndị Franciscan bụ ọkpụkpụ nke Jizọs Kraịst. Na narị afọ nke iri na asatọ, ọ bụ ihe kachasị mma nke akwa osisi, nke dị n'ihu akwa nkume ahụ. Ọ dịkwa mkpa na nwughari ikpeazụ dị na bridges ahụ mere na 2010, mgbe e wepụrụ ihe mkpuchi ekpuchi, ma tinyebe slabs granite.
Ị nwere ike ịnweta Triple Bridge site na ụgbọ ala 32. Wepu na ọdụ "MESTNA HISA". Na-esote na nkwụsị bụ n'okporo ámá Stritarjeva ulica, tinyere nke ọ dị mkpa iji na-eje ije abụọ blocks kwupụta na osimiri. Ọ ga-akpọrọ gị gaa na mmiri.
Ụlọ nri nke Chocolate (Bruges)
Ejicha mmanụ dị ọcha maka akwụkwọ
Justin Theroux kwetara na Jennifer Aniston nwere obi ụtọ n'ajị agba ya
Enwere m ike idalata ma ọ bụrụ na anaghị m eri nri mgbe elekere isii nke ụtụtụ?
Charlotte na pears na multivark
Chocolate ganache maka ekpuchi achicha
Salad "Vitamin" si na kabeeji
Oghere ntụpọ na egbugbere ọnụ n'okpuru akpụkpọ ahụ
Buscopan tupu ịpụta
Mbemiso mbemiso nke a na-etolite
Ejiri ejiji maka Halloween
Nasal tụfuru na ude
Nkume nke Kọkeshịka Ọzụzụ Atụrụ - agwa
Jiri aka na snowflakes mee ihe - ihe kachasị mma maka ịkọ oyi